चौतर्फी घेराबन्दीले सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ: नेम्बाङ – Ktm Dainik
चौतर्फी घेराबन्दीले सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ: नेम्बाङ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
नेम्बाङ अगाडि भन्छन्, ‘गठबन्धन गरेर जानु नै उहाँहरूको पहिलो पराजय थियो, त्यसमाथि पाँच दलीय गठबन्धनले नपुगेर अन्य दलसमेत जोड्दा पनि एमालेलाई दोस्रो स्थानभन्दा तल झार्न नसक्नु उहाँहरू थप पराजित हुनु हो । एक्लाएक्लै निर्वाचन लडेर विजय हुने हिम्मत् त एमालेसँग रहेनछ भनेर यो निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ ।’
उनै नेम्बाङसँग निर्वाचन, निर्वाचनको परिणामलगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यसलाई भोलिका दिनमा जनताले हेर्ने नै छन् । तर, याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संसदीय प्रणालीमा सत्तारूढ दलले कहिल्यै पनि गठबन्धन गरेर जाँदैन । गएको इतिहास पनि छैन ।
गठबन्धन गर्ने भनेको त प्रतिपक्ष दलले हो । झन् यो संसदीय प्रणालीको हिमायती भन्ने कांग्रेस नै एमालेसँग डराएर गठबन्धनमा गर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको त सुरूमा नै ऊ ‘डिफेन्स’मा पुगेको भन्ने अर्थमा बुझिनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगरमा त पाँच दलको गठबन्धनले समेत नपुगेर राप्रपालाई समेत जोडेर गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको एमालेको त स्वतः विजय नै हो । भलै त्यो सिटमा देखिएन । त्यसैले म भन्छु– यो निर्वाचनले एमालेको जनमत घटेको छैन । सबै दललाई ‘डिफेन्स’मा राखेर एमालेले आफ्नो जनमत थप सुदृढ गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसबाट हामी आत्तिएका छैनौँ । बरु थप शत्तिशाली भएर एमाले आएको छ ।
ल तपाईंले भनेको मानें । उहाँहरूको जित भयो । तर, त्यसरी जित हासिल गर्दैगर्दा यो चुनावले कांग्रेसको जनमत कति छ ? माओवादीको कति छ ? एकीकृत समाजवादी कति छ ? पहिचान भयो त ? पहिचान त हुन सकेको छैन । यो निर्वाचनवाट कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको जनमत देख्न पाइएन । किनभने सबैले सबैलाई भोट हालेका छन् तर एमालेको जनमत कति भन्ने त यस चुनावले देखाइसकेको छ । उहाँहरू आफ्नो जनमतसम्म देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । जनमत पहिचान गर्ने अवस्थामा नै पुग्नसक्नु भएको छैन । एउटा राजनीतिक दलको यो भन्दा बेहाल अरू के हुनसक्छ ?
एउटा घटना स्मरण गराउँछु– २०४७ सालपछि पञ्चहरूलाई अझ कमजोर बनाउन र पराजित गर्न फेरि सँगै लडेर जानुपर्ला कि भन्ने थियो । जननेता मदन भण्डारीले कांग्रेस नेताहरूसँग प्रस्ताव गर्दैगर्दा मलाई अझ पनि सम्झना छ कि किसुनजीले भनेका थिए, ‘२०१५ सालमा चार सिट पनि नजितेका ‘कम्युनिस्ट भैया’हरूले १५ सिट जिते मात्र पनि खसी काटेर खुवाउँछु ।
एक हजार सिटले त कांग्रेसलाई पनि पुग्दैन ।’ यति भनेपछि खाएको पान थुक्नुभयो । पछि जनमत कसको कति रहेछ भन्ने त अर्को निर्वाचन परिणामले नै देखाइदियो । एक हजार सिटले नपुग्ने भन्ने कांग्रेस कहाँ पुग्यो त ? त्यसैले जनमतलाई कहिल्यै पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । त्यसैले सिटभन्दा जनमत ठूलो हो ।
प्रतिगमन के हो ? हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नयाँ जनमतका लागि भन्दै निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेर जानुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । एकपटक त परमादेशबाट नै । तर, पनि हाम्रो पार्टीले कानुनी राज्य बलियो बनाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्‍यो । चुनावमा गयो । के ओलीजीले मात्रै संसद बिघटन गरेको हो र ? त्यसअघि गिरिजाबाबुले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । मनमोहनजीले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । यो मुलुकमा ६/६ पटक संसद् विघटन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर पनि छ । तर, ओलीजीले गरेको संसद् विघटन चाहिँ प्रतिगमन ? अनि अरूले गरेको चाहिँ अग्रगमन ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, जेठ ७ २०७९ १७:५६:२४